tayzar, Author at My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ပြဿနာကိုရှာသော ငါးရှဉ့်နှင့် ကျန်းမာရေးတန်ဖိုး
ပြဿနာကိုရှာသော ငါးရှဉ့်နှင့် ကျန်းမာရေးတန်ဖိုး ကျွန်တော်စျေးမှ ပြန်လာပြီး မီးဖိုချောင်ထဲသို့ ခပ်သုတ်သုတ်ဝင်သွားသည်။ လက်ထဲမှာ အထုတ်ကလေး တစ်ထုတ်ကို အမဲရောင် ကြွတ်ကြွတ်အိတ်လေးနဲ့ ထုတ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာအအေးခန်းထဲ ခိုးပြီး ထည့်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ခပ်တည်တည်နှင့် အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ လက်ပ်တော့လေးနဲ့ အလုပ်လုပ်စရာလေးတွေ ဆက်လုပ်နေသည်။…
Covid-19 နဲ့ ရာသီတုပ်ကွေးရဲ့ သတိပြုစရာ တူညီချက် ခြားနားချက်များ....
Covid-19 နဲ့ ရာသီတုပ်ကွေးရဲ့ သတိပြုစရာ တူညီချက် ခြားနားချက်များ…. ယခုလတ်တလော တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ Covid-19 ကပ်ရောဂါနဲ့ ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ ၂ ခုလုံးဟာ လေကတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်လို့ တူညီတဲ့အချက်တွေရှိကြသလို ခြားနာချက်တွေလည်းများစွာရှိပါတယ်။ တူညီတဲ့အချက်တွေကတော့ …… အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါတွေမို့လို့ ရောဂါပိုးရှိတဲ့ droplets တွေပါဝင်တဲ့လေကိုရှူရှိုက်မိတဲ့အခါ…
ကပ်ရောဂါမကူးစက်ဖို့ လူစုလူဝေးတွေကိုဘာလို့ရှောင်ရှားခိုင်းတာလဲ ? ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ လူတွေဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင်ကြောက်နေကြတဲ့ Covid-19 ကူးစက်ရောဂါပိုးဟာ မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန့်နှံ့ကူးစက်လာခဲ့တာ အခုဆိုရင် လပေါင်းအတော်ကြာမြင့်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်အထိ Covid-19 ရဲ့ဗီဇဟာ D614 အနေနဲ့ပဲရှိနေပြီး လတ်တလောမကြာခင်ကမှ ဗီဇအသစ် G614 ဆိုပြီး ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ G614 သာ…
What masks should be worn to prevent Covid-19 infection?
Covid-19 မကူးစက်စေဖို့ ဘယ်လို Mask တွေကိုတပ်သင့်လဲ ? Covid-19 ရောဂါပိုးဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ကူးစက်ပြန့်ပွားနှုန်းက အဆမတန်မြင့်မားလျက်ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်တွေ၊ နာတာရှည် ရောဂါရှိသူတွေ၊ ကိုယ်ခံအားမကောင်းတဲ့သူတွေဟာ Covid-19 ကူးစက်ခံရတဲ့ အခါ ရောဂါအခြေအနေတွေပိုဆိုးရွားသွားပြီးအသက်သေဆုံး တဲ့အထိဖြစ်တာတွေ့ရတယ်။ ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်တဲ့ လူစုလူဝေးတွေရှောင်ရှားတာ၊…
ကူးစက်မှုများပြီး ထိခိုက်မှုအင်အားပျော့တယ်လို့ ထင်မှတ်မှားနေကြတဲ့ ဗီဇပြောင်း Covid-19 ရောဂါပိုး..... ‍
ကူးစက်မှုများပြီး ထိခိုက်မှုအင်အားပျော့တယ်လို့ ထင်မှတ်မှားနေကြတဲ့ ဗီဇပြောင်း Covid-19 ရောဂါပိုး….. ‍ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့ကနေ စတင်ဖြစ်ပွား ပြန့်နှံ့လာတဲ့ Covid-19 ရောဂါပိုးဟာ ယခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကူးစက်ပြန့်နှံ့နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင်ဆိုးရွားလဲဆိုရင် အမေရိကန်၊ UK မှာရှိတဲ့ ဆေးရုံတွေရဲ့ စင်္ကြံတွေမှာ…
Covid-19 2nd wave ပိုမဆိုးလာစေဖို့ Stay at home နေခြင်းဟာ ဘယ်လောက်အရေးပါသလဲ...
Covid-19 2nd wave ပိုမဆိုးလာစေဖို့ Stay at home နေ​​​ခြင်းဟာ ဘယ်လောက်အရေးပါသလဲ… Covid-19 ရောဂါပိုးဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ 2nd wave စပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ လူပေါင်းထောင်ကျော်ကူးစက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်လို ဒိတ်ဒိတ်ကြဲနိုင်ငံကြီးတွေမှာတောင် ကူးစက်သူဦးရေ၊သေဆုံးသူဦးရေ အဆမတန်များပြားပြီး…
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူပေါင်း ထောင်ကျော်ကူးစက်နေပြီဖြစ်တဲ့ မပေါ့ဆသင့်သော ကပ်ရောဂါ....
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူပေါင်း ထောင်ကျော်ကူးစက်နေပြီဖြစ်တဲ့ မပေါ့ဆသင့်သော ကပ်ရောဂါ…. Covid-19 လို့ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ Corona Virus ဟာ တရုတ်မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အခုဆိုရင်ထိပ်သီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့ အမေရိကန်၊ ဥရောပနိုင်ငံတွေသာမက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကနိုင်ငံတွေကိုပါ ကူးစက်ပြန့်နှံ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ second wave ဖြစ်ပေါ်လုနီးနီး ဖြစ်နေပြီး…
Covid-19 ရောဂါပိုးရဲ့ ရှင်သန်မှုသက်တမ်းနှင့် Quarantine ရဲ့အရေးပါပုံတစ်ချို့....
Covid-19 ရောဂါပိုးရဲ့ ရှင်သန်မှုသက်တမ်းနှင့် Quarantine ရဲ့အရေးပါပုံတစ်ချို့…. ⚕️ Covid-19 (ခေါ်) Corona virus ရောဂါပိုးဟာ ယခုဆိုရင် ဗီဇအသစ်ပြောင်းလဲပြီး ကူးစက်မှုနှုန်း အရင်ကထက်ပိုမိုများပြားလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Corona ရောဂါပိုးဟာ အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်တွေ၊ ကိုယ်ခံအားနည်းသူတွေ၊ နာတာရှည်…
အရေပြားမှာ ဖြစ်ပေါ်တက်သောရောဂါများအကြောင်း အရေပြားဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အကြီးဆုံးနေရာယူထားတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သလို ဖြစ်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေကလည်း စုံလှပါတယ်။ ?အရေပြားရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေက ဘာတွေလဲ ?? ◾ရောဂါပိုးများ – မှိုကြောင့် ညှင်း၊ပွေး၊ခြေဝဲစားခြင်း..စတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လိမ်းဆေး၊ သောက်ဆေးတွေရှိပေမဲ့ ကုသချိန်ကြာတတ်ပြီး ချက်ချင်းမပျောက်နိုင်လို့ စိတ်ရှည်ရှည်ကုဖို့လိုပါတယ်။ …
?အရေပြားယားယံမှုကို ထိန်းသိမ်းနည်း? အချစ်နဲ့ ယားယံခြင်း ဆိုတာ အောင့်ထားလို့မရတဲ့ အရာတွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးမှာရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်မိလာရင် မနေနိုင်မထိုင်နိုင် မူပျက်လာတတ်သလိုပဲ ယားယံလာပြီဆိုရင်လည်း မကုတ်ဘဲမနေနိုင်အောင် ဂဏှာမငြိမ် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ မချစ်ဖူးတဲ့လူမရှိသလို မယားဖူးတဲ့လူလည်းမရှိပါဘူး။ အခုတော့ ယားယံခြင်းအကြောင်း နည်းနည်းပြောပြပါမယ်။ အချစ်အကြောင်းကတော့…